Who were Bengali, so called Rohingya?: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ ပြည်ရောင်းရေး အစီအစဉ်
ဘီဘီစီ ၀ိုင်းတော်သား ဦးမောင်မောင်သန်းမှ ဦးဆောင်ကာ၊ BBC ပြည်ဖျက် ရောင်းရေး အစီအစဉ်မှာ ပါဝင် တင်ဆက်မယ့်လူတွေကတော့ Burma Campaign (UK)မှ အဖွဲ့သားများဖြစ်ကြသော မာမူကြီး အောင်ဒင်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် အဖ ကိုမြအေး၏ သမိုင်းမျက်နှာကို မထောက်သော သမီးတော် ဝေနှင်းပွင့်သုံ တို့က ဦးဆောင်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလီ ကုလားများဆီကို ရောင်းစားသွား အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်သန်း(BBC ဒေါ်လာစား)-မေးးအခု ရိုဟင်ညာ ကိစ္စ ပတ်သတ်ပြီးတော့ Bruma Campaign(UK)မှာ ဦးအောင်ဒင်ကို မေးလိုပါတယ်။ ခင်ဗျာတို့ကို အခု ဘီဘီစီ သတင်းဌာနမှာ ရိုဟင်ညာဓာတ်ပုံကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ရှေ့အဆက်ဆက်က ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေလာတဲ့ ရခိုင်တွေကို မထည့်တောဘူး။ အဲဒါ ဘီဘီစီ ကို ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ ဦးအောင်ဒင်ခင်ဗျာ။
မာမူကြီး အောင်ဒင် - ဖြေးအော် .. ဆလာမာလီကွင် ... နောက်မှာ အာရပ်ကမ္ဘာရှိပါတယ်။ ခင်ဗျာတို့ တောင်းသလောက်ကို စိတ်ကြိုက်ဈေးပေးပါမယ်။
(သရေတွေ တမွှာမွှာကျကာ၊ မုတ်ဆိတ်ကို ဆွဲလျှက်)
ဦးမောင်မောင်သန်း(BBC ဒေါ်လာစား)-မေး : ဒါဆိုရင် ဘီဘီစီက ပြည်ပကလည်း စိတ်ဝင်စားအောင် ပြည်တွင်းကလူတွေကို လိမ်လို့ရအောင် ကိုမြအေး သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုံကိုလည်း ထောက်ခံခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာ။ သမီးဝေနှင်းပွင့်သုံ ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ ခင်ဗျာ။
ဝေနှင်းပွင့်သုံ - ဖြေးအော်.. ဆာလာမာလီကွင်... ကျွန်မကတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မအဖေ တယောက်မျက်နှာတည်နဲ့ကို ဒီကိစ္စပြတ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ထောက်ခံပေးလိုက်တာနဲ့ NLD ရယ်၊ မြန်မာ ပြည်သူတွေလည်း အကုန်လုံး ထောက်ခံကြပါလိမ်မယ်။ ဒီကိစ္စလည်း ကျွန်မ နာမည်ကြီးမယ် ကိစ္စပဲ ကျွန်မကတော့ ထောက်ခံပါတယ်။ (NlD နဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို နွားတွေလို့ စိတ်မှာ တွေးလျှက် ပြုံစိစိဖြင့်)
ဦးမောင်မောင်သန်း(BBC ဒေါ်လာစား)-မေးးဒါဆိုရင် ဒီကိစ္စ သိပ်အပန်အကြီးပါဘူး။ ဓာတ်ပုံလေး တပုံလောက်တင်ပြပေးလိုက်တာနဲ့ ဘာထိခိုက်မှုမှ ရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။ (ဒေါ်လာကို စိတ်ထဲတွင်မြင်လျှက်) ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက နယ်မြေကျယ်ပါတယ်။ ဒီလောက်လည်း ထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ (ဒီလောက် ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ဒီရိုဟင်ညာတွေနဲ့ ငါသမီးကို ပေးစားလိုက်ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲလို့ စိတ်ထဲတွင်တွေးလျှက်)
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 1:10 PM
There are2Aung Dins, one is old Aug Din from U Nu pyi pyay PDP and another younbger Aung Din of USCB, US. Former is Burmese muslim. Both are fools!